Famoronana tany entina mpanjaka voafehyHanova
Fahatongavana teo amin'ny fahefanaHanova
Politika sy fiovanaHanova
Fifandraisana amin'ny any ivelanyHanova
Fionganana ary sesintanyHanova
Nalevina tao Alger ny fatin'i Rainilaiarivony. Tamin'ny taona 1900 dia nentina ho any Madagasikara ny fatiny ary nalevina tao amin'ny fasam-pianakaviana naorin'i Jean Laborde tao Isotry. Samy nandray fitenenana ny Jeneraly Gallieni sy ny zafikelin'i Rainilaiarivony tamin'ny fandevenana izay natrehan'olona avo sata malagasy sy frantsay. Hoy i Gallieni : «Nendrika ny nitondra anareo i Rainilaiarivony. Hisy tsangam-bato ho fahatsoarovana azy ve amin'ny taona ho avy? Tokony adidin'ny Malagasy ny fahafahana manao izany. Efa naka an'i Madagasikara i Frantsa, ka na inona na inona ny tranga dia efa tapaka ny hevitra. Fankasitrahana an'i Rainilaiarivony ny fiarovana azy [an'i Madagasikara] tamin'ny fomba nataony.» Taorian'ny fandevenana dia nisy takelaka fahatsiarovana napetraka teo amin'ny fasan'i Rainilaiarivony, izay ahitana soratra hoe «Rainilaiarivony ex Premier Ministre et Commandant en chef de Madagascar, Commandeur de la Légion d'honneur».
Registers of Rainilaiarinony (1864-1895) (British Library - Endangered Archives Programme)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rainilaiarivony&oldid=815164"
Dernière modification le 8 Aprily 2018, à 10:39
Voaova farany tamin'ny 8 Aprily 2018 amin'ny 10:39 ity pejy ity.